Accueil > Gazetin'ny nosy > Hetran’ny écolage : Tsy manaiky ny katôlika sy ny tsy miakina
Hampadoavin’ny fanjakana 10% ny saram-pianarana isan’ankizy ny sekoly tsy miankina manomboka izao. Ny DGI (direction génerale des Impôts) na ny tale foibe misahana ny hetra no efa maniraka ny mpiasany hanatanteraka izany. Hampiharina manomboka amin’izao taom-pianarana 2021-2022 izao. Efa tonga eny amin’ny sekoly tsy miankina ireny ny mpanao fanadihadiana. Tsy mety mandray ireny olona ireny nefa ny talen-tsekoly maro eto Antananarivo Fanampotehina ny sekoly tsy miankina tanteraka ity raharaha ity. Ny filohan’ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara Rakotomalala Cellin dia nanambara fa zava-doza ho any sekoly tsy miankina izao fandoavan-ketra izao.
Maro amin’ireo raiamandrenin’ny mpianatra no tsy mahavoaloa ny saram-pianaran’ny zanany. Misy koa no voatery miala an-daharana noho izany. Ny sekoly indray dia maro no tsy afaka mandoa ny karaman’ny mpampianatraintsony noho izany koa. Ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa amin’ireny sekoly tsy miankina ireny isam-bolana aza dia efa be dia be ny sekoly no tsy mahavita izany. Izao ho esorina aminy indray ny kely ananany.
Tena fanapotehina ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara izao. Ny sekoly katôlika moa dia efa nilaza tao amin’ny radio Don Bosco andro vitsy lasa izay fa tsy mankasitraka izao fanampahan-kevitrin’ny fanjakana izao.
Mifanohitra tanteraka amin’ny politikam-pampianarana maneran-tany izao ary indrindra ny antsika eto Madagasikara manokana.Ny fanjakan indray no manao izay haharava ny sekoly. Sekolim-panjakana kitoatoa no terena hoan’ny zanakin’ny mahantra dia ny EPP sy ny CEG ary ny Lycée izany. Ny zanakin’ny manankatao sy mpitondra ambony dia alefa amin’ireo sekoly lafo vidy sy manarampenitra, na alefa any ampitandranomasina.
Tsy orinasa akory ny fampianarana sy ny fanabeazana ka hampandoavina hetra toa izao indray. Mbola tsy nisy toa izao teto Madagasikara hatramin’izay. Tsy ny hetra haloan’ny sekoly tsy miankina no hahafaka ny fahantrana eto amin’ity firenena ity. Tokony ho mena fanampiana toa ny JIRAMA ireo sekoly tsy miankina ireo raha ny tokony ho izy.